Ndị mmekọ Cleanbuild.africa kere Space Space iji nwee ọgbakọ ọgbakọ ndị na -ahụ maka ihu igwe nke mbụ
Nkwekọrịta akụkọ ihe mere eme nke Paris na Mgbanwe Ihu Igwe nke malitere na 2016, enyerela mba dị iche iche gburugburu ụwa aka inwe ezi ebumnuche banyere nzaghachi ha n'ihe egwu na -arịwanye elu nke mgbanwe ihu igwe.
Dịkwa ka ọgbakọ ọgbakọ mgbanwe mgbanwe ihu igwe nke iri abụọ na isii nke ndị otu (COP26) na-abịaru nso, ndị isi ụwa na-agbakọ aka ọnụ na-enye azịza ga-enyere aka ịdobe ụwa efu ka ọ na-erule 26, na-edebe ụwa n'ime 2050C nke okpomoku.
Maka nke a na ihe ndị ọzọ, dị ọcha.africa na mmekota na Oghere okike na Innovation Nkwado Network na -akwado a ọgbakọ ndị na -ahụ maka ihu igwe nke ahụ ga -ebute ụfọdụ nsogbu dị mkpa gbasara teknụzụ dị ọcha na mgbanwe ihu igwe na ọnọdụ Africa.
Dị ka Ulo oru gburugburu ebe obibi, gafere SDG 13: Omume ihu igwe, mgbanwe akpachapụrụ anya na ikuku dị ala, ụzọ na-eguzogide ihu igwe nwere ike inye aka na iru na ichekwa SDG ndị ọzọ metụtara ya bụ;
Converge II: Pan-African Blockchain & Crypto Meetup na-eme na Nọvemba 27, 2021
Cyberchain 2021: Cybersecurity na Blockchain Conference na -eme na Nọvemba
Climateaction.africa mara ọkwa mgbanwe aha ya na Climateaction.africa
Cleanbuild.africa na -ebido Mgbasa Mgbasa Ozi Dijitalụ iji chụpụ Mgbanwe Ihu Igwe
Agụụ Zero (SDG 2)
Ọnụ ọnụ na ike dị ọcha (SDG 7)
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ihe ọhụrụ na akụrụngwa (SDG 9)
Obodo na obodo na -akwado (SDG 11)
Oriri na Mmepụta dị mkpa (SDG 12)
Ndụ n'okpuru mmiri (SDG 14)
Ndụ n'elu ala (SDG 15)
Ihe nke a pụtara bụ na enwere ike mezuo ebumnuche niile na -adigide ọnụ kama ịnọpụ iche.
N'ihi nke a, ihe omume ihu igwe chọrọ mbọ ọnụ iji belata ikuku anwuru ọkụ, na-eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ eme ihe ma na-ewusi nkwụsi ike na ike mgbanwe maka mmetụta ikuku na-ebute.
Ọ dị oke mkpa karịa ka mba Afrịka mezuo ebumnuche ndị a n'ihi na kọntinent ahụ enweghị oke maka mmetụta mgbanwe mgbanwe ihu igwe, nke na -emebi mmepe ya ma na -eyi ndụ nde mmadụ Africa egwu.
Omume a lekwasịrị anya ihu igwe na isiokwu "Iwulite usoro gburugburu ebe obibi na -adịgide adịgide", ga -eme na Fraịde, Ọktoba 8, 2021.
Ọ na -ezube ikpokọta mmalite mmalite na ndị na -akwado ya, ndị nwere oke, ndị na -eme iwu, ndị na -etinye ego na ndị isi egwuregwu ndị ọzọ n'ofe ihu igwe niile sitere na mmepụta Greentech, ume ọhụrụ, mmetọ na njikwa mkpofu, na nkwado, n'etiti ndị ọzọ.
Ihe a ga -atụle na mmemme ahụ
A ga -etinyerịrị nzukọ ọgbakọ mepere emepe Owuwu Arụrụ Arụrụ Arụrụ na gburugburu ihe ndị a:
Ịhụ na omume na atụmatụ ihu igwe na -etinye ọnụ yana mmekorita na ọkwa mba na mpaghara: uru nke imekọ ihe ọnụ.
Ịsapụta ọrụ mmalite teknụzụ dị ọcha na -arụ iji hụ na echekwabara Afrịka pụọ ​​na mmetụta ọjọọ nke okpomoku zuru ụwa ọnụ
Na -enyocha ọnọdụ omume/atụmatụ ihu igwe na Africa; ihe ịma aka, ohere na ọrụ nke Mgbasa ozi n'ịgbalite mmetụta mmetụta ihu igwe.
Na -eme ka a mata ihe omume ihu igwe na ebe nkewa dị yana ụzọ isi gboo oghere ahụ.
Nkọwa nke ihe omume
Ụbọchị: Fraịde, Ọktọba 8, 2021
Oge: 10am - 12pm
Platform: mbugharị (a ga -ekekọrịta njikọ mgbe ndebanye aha)
Register Ebe a ịga ma pịa Ebe a iji nweta mmelite kwa ụbọchị site na cleanbuild.africa
Onye guzobere ojii? Tinye akwụkwọ maka Apple Entrepreneur Camp 2022
#AfriTECH2021: Ojobo, Onye isi oche AfIctF, kwusiri ike mkpa maka nha anya dijitalụ na Africa
Jise na-echekwa ego mmụọ ozi $100k, na-ekwupụta ngwa ọrụ nri
Akwụkwọ 5 kacha elu maka onye ọchụnta ego teknụzụ
Ọzụzụ nta akụkọ dijitalụ na Africa na-akwalite dịka ndị mmekọ Google UNESCO
MainOne na -akwado ụlọ akwụkwọ Lagos ka ọ na -ekwughachi nkwa ya na ndị ọbịa